Sidii caadada aheyd ayaan islabaxney oo aan is raacney. Wuxuu igeeyey guri aad loo qurxiyey oo sifiican loo gogley. Waana is garab fariisaney anagoo is eeg-eegeyna. Waxaan hilmaamey Xadiithkii Nabiga Salallahu Aleyhi Wasalam ee uu nooga digey inaay nin iyo naag ajnabi kala ah meel cidla’ah wada fariistaan! Waxaan bilaawney inaan eegaya oo uu isagana i eegaya ilaa aan is arkey anigoo hoos jiifa! Waxaan arkey anigoo gacan kuheynin wixii aan lahaa wixii ugu qaalisanaa! Waxaan soo kacay sidii anigoo waalan markaas ayaan ku iri: “maxaad igu sameyneysaa? Hacabsan!Waxaad tahey xaaskeyga? Sideen xaaskaada kunoqdey adigoon imahersan? Ayaan kucalancaley! Waan kumahersandoona mardhow!” Ayuu iigu laabqaboojiyey!
Posted at 06:01 am by xaashiyare
Carruurtaada iyo Khatarta Intarnet-ka
Ma'Usheegtay Carruurtaada Waxa lagudboon Marka ay Dhex-Mushaaxayaan Internetka
. Username & Email: oo qura isticmaal marka aad kujirtit qolka kaftanka (chat)
. Click here for more about safety
. Ma Ogatahay meesha aybooqanayaa.
. Ma lasocotaa cidda internetka aykala hadlayaan.
. MaOgyihiin In aysan siin qofna wax lagugarankaro.
Haddaba Sheekadani maskaxdaada ayey kawareeridoontaa ee akhri una gudbi carruurtaada. Shannon waxay maqleysey sanqarta kabaha qofka kadambeeya mar ay u socotey gurigooda. Taasi waxay wadneheeda ku abuurtay garaac.
"Doqon ayaad tahay", nafteeda ayey u sheegtay, "Wax kudabsocdaa majiraan".
Socodka ayey boobsiisey si ay khatar oo dhanba uga fogaato, laakiin sanqartii kadambeysey aad ayey ugusoodhowaaneysaa marba marka ka dambaysa. Waxay baqdin weyn ka qabtey in ay gadaal fiiriso, waxayse kufarxsanayd dhowaanta gurigooda. Shannon iyadoo ducaysaneysa ayey tiri, " Ilaahow guriga nabad igu gaarsii.". Waxay aragtay nalka irrida hore ee guriga oo aad u dhalaalaya, orod ayey cagaha waxkadayday ilaa gudaha guriga. Markii ay gudaha gashay albaabka ayey iskutiirisay si ay unasato waayo markaan waxay dareemeysaa nabad guriga gudihiisa. Kadib Daaqadda ayey fiirisay, mase cidiba bannaanka majoogto. Buugaagtii ay wadatey ayey kursiga fadhiga kuxoortay, kaddibna intey inyar oo macmacaan ah afka kudhifatay ayay horay Intarnetka kafariisatay si ay udhexmushaaxdo.
Waxay internetka kugashay magaca ByAngle213. Saaxiibadeedii internetka ayey fiirisay bal in ay meesha kujiraan, waxay aragaty in Goto123 uu kujiro internetka. Waxay markiiba u dirtay dhambaal degdeg ah:
ByAlgel213: Iska warran, waxaan ku faraxsanahay in aad internetka kujirtid. Waxaan u malaynayey in qof idabasocdo markii aan guriga usoosocdey. Waxay ahayd arrin laga argagaxo ama baqdin badan. Goto123: Xad-dhaaf ayaad u daawatay TV-ga. Maxaa qof kuu soo dabagelaay? Miyaadan kunoolayan xaafad nabad ah.
ByAlgel213: Dabcan haa. Waxaan filayaa waxay ahay mala-awaalkayga sababtoo ah qofna ma'arkin markii aan fiiriyey daaqada.
Goto123: Haddii aadan qofna magacaaga siin internetka adigoo kujira. Taas miyaad samaysay?
ByAlgel213: Xaqiiqadii maya. Ma ahi doqon, sow ma-ogid.
Goto123: Kubad masoo cayaarateen Iskoolka kaddib?
ByAlgel213: Haa, waana guulaysaney.
Goto123: Taasi waa arin wanaagsan. Yaa la cayaarteen?
ByAlgel213: Waxaan la cayaaray "Hornets". Dharkoodu (direyskoodu) waa wasakh miiran. Waxay u egyihiin sida shinnida.
Goto123: Maxaa kooxdiina lagu magcaabaa?
ByAlgel213: Waxaan nahay "Canton Cats". Waxaan dharka kooxdanada kusawiran cidiyaha shabeelka. Aad iyo aad ayey u heer sarreeyaan (dharkayagu).
Goto123: Makubaddad ma geesaha kasoo tuurtaa?
ByAlgel213: Maya, waxaan ka cayaaraa dhexda. Waxaan rabaa in aan tago ee nabadey. Waayo casharkayga shaqada guriga waa in aan dhamaystiraa inta aan waalidkay iman guriga, marabo in aan ka caraysiiyo waalidkay. Nabadey!
Goto123: Dibdambe ayaan isumaqlidoonaa. Nabadey. Haddase.....
Goto123 wuxuu bilaabay in uu dib u baaro hadaladii Shaannon isaga oo ka baaraya shaashadda Kambiyuutarka qaybta dadka xubnaha ka ah (qolka sheekada). Wuxuu daabacday dhamman hadaladii Shannon. Wuxuu sooqaatay qalin wuxuuna bilaabay in uu qoro intii uu kayaqaanay Sharoon; Sida dhalashadeeda oo ah Jan 3, 1985 da'deeduna tahay 13 jir. Gobolka ay kunooshahay oo ah "North Carolina ". Waxyaabaha ay xiisayso oo ay kamidyihiin kubadda, heesida (koox), barafka lagudulcaro iyo in ay jeceshahay in ay aado suuq weynaha looyaqaan "Mall".
Intaas kasokow waxa uu yaqaanay in ay kunooshahay "Canton" waayo iyada ayaa usheegtay. Waxa kale oo uu ogaa in ay guriga keligeed joogto galabkasta 6:30pm ilaa ay waalidkeed kayimaadaan shaqada. Wuxuu ogaa oo kale in ay kooxdeedu cayaaraan kubbad maalin kasta oo Khamiis ah, kooxdaas oo layiraahdo "Canton Cats" . lambarka ay jeceshahay 7 oo dharkeeda kudhegan. Wuxuu ogaa in ay tahay fasalaka toddobaad ee dugsiga lagumagcaabo "Canton Junior High School.". Dhammaan akhbaartaas iyada ayaa siisay markii ay internetka kuwada hadlayeen. Hadda wuxuu hayaa war kufilan oo uu ku raadin akro.
Shannon waalidkeed uma sheegin arrintii ay galabta lasoo kulantay markii ay soosocotey. Ma aysan rabin in waalidkeed sawirto khatar oo markaas laga yaabo in ay udiidaan in ay soocayaarto kubadda mardambe. Waalidkeed waxay ahaayeen kuwo aad utaxadar badan oo xasaasi ah. Waxay aad ujeclaysatay in aysan malaha ahaan lahayn ilmaha qura. Malaha waalidkeed sidaas ugama taxadari lahayn haddii ay lahaan lahayd walaalo.
Markii lagaaray Khamiistii, Shannon waa iska illowday arrintii sanqarta iyo kabihii gadaasheega kasoo jaqaf-jaqaflahaa. Kubadii ayaa bilaabatay, markii ay cayaartii isku bubadhacday ayey waxay aragtay qof ku dhaygagsan oo aad u fiirinaya. Markaas ayaa maskaxdeeda waxaa kusoodhacay arrintii hore. Waxay fiirisay ninkii iyada oo kubadda dhexda kacayaareysey mase si aad ah ayuu u firinayaa. Waxay iskutiirisay deyrka goobta cayaarta, markii ay fiirisayna wuu u dhoolacaddeeyey. Uma muuqan qof cabsi kujirto (ninka), markiiba degdeg ayey isu illowsiisey cabsida ay dareentay.
Markii cayaartii dhammaatay, waxa uu ninkii kufariisatay kuraasta garoonka mid kamida, ayadiina waxay lahadleysey tababareheedii. Waxay dareentay in ninkii uu markale u ilka caddaynayo. Dhinaca ayay ka dhaaftay iyada oo aan lahadlin, markaas ayuu madaxa u ruxay, iyadiina markaas ayey u ilka caddaysay. Mageceeda ayuu ka arkay dhabarka shaatiga ay gashanayd. Wuuna ogaaday in uu helay gabdhii oo ay tahay Shannon.
Si aamusnaan ah ayuu u dabagalay isaga oo aan u dhowaanayn. Guriga Shannon aad ayuu ugudhowaa goobta kubadda. Markii uu arkay gurigeeda, dib ayuu ugusoolaabtay gaarigisii oo u yaaley agagaarka jardiinada. Hadda halkaas ayuu waqti ku kusugayaa.
Waxa uu go'aansaday in uu cunto yar soo cuno inta uusan soo aadin guriga Shannon. Wuxuu tegey makhaayad halkaas oo uu cabbaar fadhiyey si uu waqtiga isugu beego. Shannon waxay goordambe iyada oo kujirta qolkeeda maqashay cod ka imanaya qolka fadhiga .
Shannon kaalay halkan, waa aabeheed oo aad u xanaaqsan. Shannon garanayn waxa uu aabheheed ugu caraysanaa. Markii ay qolkii aabeheed uguyeerayey tagyay, waaba ninkii ay ku'aragtay goobta cayaarta oo fadhiya kursigii fadhiga. Aabeheed ayaa markaas kuyiri fariiso Shannon, ninkani wuxuu noosheegay sheeko aad u cajaa'ib badan oo adiga kugusaabsane. Shannon waxay si taxadar kujiro ugu fariisatay kursi udhow kii uu ninku ku fadhiyey. Sidee waalidkay wax iigaga sheegikaraa weligayba ma'arkine? Maanta kahor!
"Ma igaraneysaa?" ninkii ayaa weydiiyey Shannon. Maya ayey Shannon kujwaabtey. Waxaan ahay askari ayuu yiri, waxaana ahay saaxiibkaagii internetka ee GoTo123.
Waad igu cayaareysaa ayey Shannon oo amankaagsani kujawaabtey. Taasi sinaba cagliga uma gelikarto. GoTo waa ilma yar oo 14 jir ah oo kunool Michigan!
Ninkii oo dhoolacadaynayaa wuxuu kuyiri Shannon " Waan ogahay in aan anigu taas kusheegay, laakiin ma'aha xaqiiqo". Ma aragtaa Shannon waxaa jira dad iskadhiga in ay yihiin carruur, waxaana ahaa mid kuwaas kamida, laakiin halka ay kuwakale rabaan in ay carruurta dhaawacaan ama halis geligaan, anigu waxaan kamid hay koox waalid ah kuwaas oo u guntadey in ay carruurta kadifaacaan cadowgooda (iyo halista kaga imankarta Intenetka.)
Waxaan halkan u imid in aan kula kulmo oo kutusaaleeyo sida ay khatarta u tahay in aan warbadan oo lagugu garankaro aad siisid dadka aad ku kulantaan internetka. Waxaad iisheegtay akhbaar aad u badan oo iifududaysay in aan kuhelo. Magacaaga, iskoolka aad dhigatid, magaca kooxdaada kubada, qaybta aad kacayaartid. Lambarkaaguna waxa uukadhigay in aan kuhelo wax aad usahlan.
Shannon oo weli yaaban ayaa tiri "Mawaxaad ileedahay kuma nooli Michigan?"
Isaga oo qoslaya ayuu kujawaabey; "Maya, waxaan kunoolahay Raleigh." Waxaan sidaas u abuuray in aad dareetid nabad oo aadan colba meesha u soodhigan, adiga oo u malaynaya in aan kunoolahay meel kaafog.
Madaxa ayey ruxday.
Saaxiibkay gadhisii waxay ahayd adiga oo kale. Laakiin nasiib iyadu mayeelan. Nin ayaa helay (sida aan kuuhelay oo kale) wuxuuna diley mar ay keligeed guriga joogtay. Carruurta waxaa labaray in aysan qofna u sheegin in ay guriga keligood joogaan, laakiin taas waxa aysameeyaan marka ay Internetka kujiraan. Dadka khiyaamada wata waxa ay akhbaartaada helaan iyaga oo su'aalaha hadba dhinac kaaga keenaya, waaba adiga oo aan ogeyn goorta ay heleen akhbaartaad oo dhan. Waxaadan ogaaneysaa arrintaas goor-gale-kahadaafey ama aan aadan waxba kaqabkaray. Waxaan rajeynayaa in aad cashar wanaagsan arrintaan kuqaadatay oo aadan dibdambe arrintaan oo kale u samayndoonin ama ugu dhaqaaqi doonin.
Masamayndoono ayey Shannon hadalkii aad ugu xoojisey.
"Ma Usheegeysaa carruurta kale arrintaan si ay u ahaadaan nabad iyo badbaado qab.?"
"Waa ballan" ballan weeye ayey shannon kujawaabtey.
Habeenkaas Shannon iyo aabeheed iyo hooyadeed waxay baryeen Ilaah iyaga oo Ilaah ugamahad naqaya badbaadada uu badbaadiyey Shannon, taas oo ay qarka u saaraan lahayd arrin aad u khatar ah oo masiibo ah.
Halkaas ayaa sheekadii naxdinta qarka u istaagtey ku dhammaatay. Waxaana waajib ku ah isla mar ahaantaana la gudboon waalidiinta in ay caruurrtooda baraan khatarta uu yeelankaro Internetku. Waxaa bulshadu nabad iyo xasilooni dareemeyaan marka carrurtoodu nabadqabaan.
Waxaa waajib ku ah waalidka in ay ogaadaan meelaha ay booqdaan marka ay Internetka dhex-mushaaxayaan, iyo cidda ay lahadlayaan ama lakaftamayaan.
Waxaan kuboorineynaa carrurta in marka ay maqlaan sheekadan ay usiisheegaan saaxiibadooda kale si ay iyaguna ugu baraarugaan khatarta ka dhallan karta Internetka.
Posted at 05:50 am by xaashiyare
Assalaamu calaykum saaxiibadayda sharafta laheey waan ku salaamay salaan ka dib Marna ma rumaysanaysid waxa igu dhacay iyo waxaan dhib naftayda u soo jiiday, aduunkan waxa iigu wayn oon doonayo maanta waa danbi dhaaf ilaaah iyo INAAN DHINTO INTAANAN ANIGU NAFTAYDA DILIN. Ma garanyo waxaan naftayda ku sameeyo quusashadaan ka dib.
Maalin ima soo maro illaa waan ooyaa illaa aan gaaro inaan wax arki waayo. Maalin walba waxaan ku fakaraa inaan is daldalo, noloshaydu wax qiimo ah iima laha.
Saacad walba waxaan tamanniyaa dhimasho Shallaaytaydee ma dhasheenaa, shallytadaydee la ima abuureenaa!!!!! maxaan sameeyaa wareer baan ku sugnahaye wax walboo agtayda ah waxay soo baxeen waxaan mibna lahayn dhadhanna lahayn.
Labadaydan gacmood ayaan ceeb ugu soo jiiday naftaayda iyo qoyskayga. Waxaan ceebeeyey ninkayga iyo caruurtayda waxaan dumiyay gurigayga. Wax walba waan ood i tiraahdaan waan xaqsadaa. Magac walboo xun iyo tilmaam walboo xun ood igu tilmaamtaan waan istaahilaa, nacas dabaal caqlilaaw, hawa raac iyo iyo iyo.
Sheekadaydu waxay ka bilaabatay gabar saaxiibtay Gurigeeda. Maalin ayay gurigeeda igu marti qaaday saaxiibadaay waxay ka mid ahayd kuwa internetka isticmaala inta badan. Waxay bilowday inay intenetka wax iga barto. Muddo 3 bilood gudaheeda ayay wax walba oo ku saabsan internetka igu bartay waxay i bartay chat roomyaashoo dhan waxay kaloo i bartay sida wax loo baaro iyo sida loo raadsho web site yaasha cusub iyo kuwooda wanaagsan iyo kuwooda xunba.
3daas Bilood gudahooda ayaan waxaan ninkayga ku qasbay inuu internet guriga soo galiyo. Aad ayuuna oga soo horjeeday arrintaan illaa aan ku qanciyay inaan daal wayn dareemayo maadaama aan ka fogahay ehelka iyo asxaabtaba, waxaana xujjo oga dhigay inay saaxiibaday wada isticmaalaan internet, halkaasna aan kala sheekaysan karo internetkuna nooga lacag jabanayahy Telefoonka. Wuu ogolaaday dagaal badan ka dib asagoo aniga ii naxariisanaya.
Mar walba oo uu ninkaygu guriga ii soo galo si dagdag ah ayaan u damiyaa internetka taasoo uu qariibsaday lana yaabay, ma uusan iga shakisanayn laakiin wuxuu uun doonayay inuu arko waxaan ka samaynayo Internetka. Laga yaabee inuu dareemay masayr ka dib markuu i arkay anoo maalin ku jira Voice Chat "qof kula sheekaysanaya cod ahaa" isticmaalaya mikrafoon. Markaa ka dib ayuu bilaabay inuu i canaanto asoo leh internetku waa wax balaaran waxyaalo badanna laga faaiidaysan karo, maad ka baratid luuqadaha iyo sida loo sameeyo website anfacaya dadka ood iska daysid waxa maalaa yacniga ah ood waqtiga isaga dhuminaysid, ka dib waxaan isku dayey inaan ka faaiidaysto internetka mar danbana aanan galin chat roomka "Qolalka wada sheekaysiga" inaan la hadlayo walaalo iyo saaxiibo mooyee.
Waxaan ka tagay tarbiyadii caruurtayda waxaana u daayay khadaamaddda guriga, waxaan garanayay waxaam xafiday waqtiyada uu ninkaygu shaqada dhammeeyo gurigana ku soo aadanyahay si aan u damiyo computerka oo uusan iigu arag anoo ku mashquulsan chatka.
Waxaan si aada u dayacay naftayda. waagii hore aad ayaan isu qurxin jiray sida ugu qurux badanna baan u labisan jiray intuusan ninkaygu shaqada ka soo laaban, internetka ka dib waxaan bilaabay inaan tartiib tartiib naftayda iyo ninkayga iyo caruurtayda u illaawo illaa aan dhammaan wada illaaway, waxaana bilaabay inaan samaysto cudurdaaryo beena, sida:- imaadan sheegin inaad waqtigaan soo laabanaysid ama waqtigaagii baad ka soo hor martay iyo kuwa badan, waxaan aad ugu mashquulsanaa internetka illaa aan gaaray inaan soo kaco ka dib markuu seexdo oon galo internetka dibna sariirta ugu laabto intuusan soo kicin, laga yaabee inuu dareemay internetka waxaan ku hayyo inay tahay waqti dhumis ee aanan waxba ka faaiidaysanayn, laakiin wuxuu iiga dhimrinayay kalinimada maadaama ay ehelku iga fogyihiin, asna shaqo ku mashquulsanyahay, balse waxaa aad u dhibayay ihtimaam la’aanta aan u hayya caruurteenna mar walbana wuu igu canaanantaa laakiin hubka aan isku daafaco ayaa ahaa oohin iyo inuusan ogayn waxa guriga ka socda intuu ka maqanyahay, see baad saas ii oran kartaa.
Aan soo gaabshee Internetka intaan guriga la soo galin ka hor ninkaygu marka uu guriga ka maqanyahay waxaan wici jiray tobannaan jeer inaan maqlo codkiisa oo kaliya haddan internetka ka dib inaan is maqli wayno oon waco maraan dan wayn aan ka leeyahay oo kaliya.Ninkayga waxaa ku dhalaashay masayr wayn oo uu u qaaday Internetka laakiin masayrkaan waxaan kula dagaallami jiray boohin iyo sirta haweenka iyo xeeladda wayn een u leenahay qancinta nimankeenna.
Mudadaas 6 bilood ah ayaa waxaan calaaqo wayn na dhex martay magacyo la soo toobal caaraystay "Nick Names" aanan garanayn inay niman yihiin iyo inay naago yihiin toona, qof walba oo chat ka ii soo gala si uu iila sheekaysto ayaan la sheekaysanayay xattaa anoo og inuu yahay nin waxaan la sheekaysanayo. Waxaan ka dalbanayay inay iga caawiyaan computerka wax badan ayaan ka bartay oo ku saabsan internetka. Dadkaas mid ka mida ayaa calaaqadeennu aad u waynaatay sababtoo ah wuxuu xirfad wayn u lahaa internetka, mar walba waan la sheekaysanayay dhib walba oo iga soo waajahda computerkana asaan kula ordayay ilaa uu kulankeennii noqday mid yawmi ah oo maalin walba ah. Waxaan jeclaaday sheekadiisa iyo kaftankiisa xiriirkeennu inuu sii waynaado ayuu bilaabay maalinba maalinka ka dambaysa. Aniga iyo ninka lagu magacaabo ????? kuna naynaasan –hebal—arrin wayn wayn ayaa na dhex martay wuxuu igu kaday hadalkiisa malab ka ah erayadiisa jacaylka eed moodo inuu buug ka soo xafiday, laga yaabee in erayadiisu aad aysan u qurxoonayn laakiin shaydaan ayaa malab ii mariyay iiguna qurxiyay si xadka ka baxsan.
Maalin maalmaha ka mid ah ayuu iga dalbaday inuu codkayga maqlo wuuna ku adkaystay dalabkiisa illaa uu igu handaday inuu iga tagayo iskayna mootin doono, waxaan isku dayay inaan hor istaago dalabkiisa kana dhaadhiciyo inaanan awoodin laakiiin waan ku guulaysan waayay. Meel dhexe ayaan isugu nimid waan wada hadlaynaa bishardi inay noqoto hal wada hadal mar danbana aanan wada hadlin, taleefoon namarradii ayaan is dhaafsannay, waan wada hadlnay anoo walwal wayn iyo cabsi igu jirto, laakiin hadalkiisu aad ayuu u macaanaa, waan gariirayay marwalboon maqlo codkiisa waxaan ogaa inuu shaydaan sadex nagu ahaa iina qurxinayay arrintaan, lana dagaallamayay dhawrsanaantayda iyo akhlaaqdayda iyo diiintayda intii ka dhimmanayd. Halkaan ayayna ka bilaabatay noloshayda daba gadoonkeedu, qof walboo akhriyaa sheekadaan wuxuu oran in ninkaygu yahay qof dayac badan maqnaashana badan laakiin arrintu waa caksiga shaquu ka soo bixi jiray saaxiibadiisna in badan ma aadi jirin aniga awgay iyo kalinamada oo uu ila nacsanaa.
Maalmo badan markay soo wareegeen ka dib oon macallimad ku noqday Internetka oon maalin walba ku jiri jiray 8 saacadood ilaa 12 saacadood, waxaan bilaabay inaan karaahsado ninkayga joogitaankiisa in badanna aan taas ku cataabo kuna boorriyo inuu waqtiyada shaqada badsado galbihiiyoo kale uu shaqeeyo si aan oga baxno daynta is fuufuushay ee nalaku leeyahay, run ahaanna hadalkaygii ayuu qaatay saaxiib ayuu mashruuc yar kula noqday shirko, markaa ka dib saacadaha aan Internetka ku jiro intii ayay ka sii bateen.
Calaaqadaydii aan ninkaan internetka iska baranay la lahaa ayaa sii xoogaysatay, wuxuuna bilaabay inuu iga dalbado inaan is aragno codkayga markuu maqlay ka dib, uma aanan aabayeelayn dalabkiisan kamana hoos qaaday, waxaana ku cataabi jiray ku canaanan jiray dalabkaan uu iga dalbanayo inaan kulanno laga yaabee inaan anba aad u xiisaynayay araggiisa laakiin inaan anna xiisahayga cadaysto waxaa iga hortaagnaa cabsi aan cabsanyo fadeexad ee maahayn cabsi aan Ilaah.
Dalabkiisii ayuu aad ugu adkaystay aadna iigu ilxaaxiyay inaan is aragno arag oo kaliya aan wax kale ahayn. Waan aqbalay bishardi inay ahaato tii ugu horraysay uguna danbaysay, wuxuuna yiri anba intaas oo kaliyaan doonayaa inaan ku arko oo kaliya wax hadal ahna aanan is dhaafsan. Waxaan filayaa inuu rumaysan waayay inaan ogolaaday ka dib markuu ku dhawaaday quusasho, waxaana ka dareemay inuu farax la kala batay, wuxuu igu qanciyay inuu yahay qof ilaah ka baqaya wax dhibana haba yaraatee aysan xaggiisa iga soo gaarayn uuna ii noqon doono gidaar oo kale intaan wada joogno wax dhib ahna aanan arki doonin wuuna ogolaaday shardigii wuxuuna ku dhaartay inaysan arrintu aragti kaliya dhaafin. Waana yeelay.
Waa ballannay asoo shaydaan sadex nagu yahay suuqyada waawayn mid ka mida dukaan kaas saacadaas daqiiqadaas. Wuu i arkay anna waan arkay "Shallaytadaydeen ma arkeenaa"!!!!!!!!!!!! wuxuu ahaa quruxloow aad u quruxbadan jirkiisa iyo dheerarkiisa dhan walba oo jirkiisa ahna waa i cajabisay muddu daqiiqad ka yar daqiiqadaas aan arkay waxaan dareemay inaanan arag ninka qurux badan intaan noolaa, ninkaygu ma foolxumayn mana gaabnayn manab buurnayn laakiin daqiiqadaas waxaan dareemay inaanan horay u arag nin ka qurux badan. Asna xaggiisa ma rumaysan inuu la sheekaysan jiray gabar sidayda u eg, wuxuuna ii cadeeyay inuu aragtidayda ku farxay quruxdaydana uuna rumaysan waayay inuu gabar saas u qurxoon mudadaas la sheekaysanayay, wuxuuna ii jeclaaday sidii wax waalan, wuxuu bilaabay inuu i yaraahdo waan is dilayaa haddaan ku waayo wuxuu kaloo oran jiray shallaydee waligay kuma arkeenaa wuxaan dareemay naagnimo waxaan bilaabay inaan qurux aanan horay isugu tuhmi jirin inaan isku tuhmo xattaa guurkayga ka hor.
Ma uusan ogayn in la i qabo ninkaygana uu ilaah caruur iga siiyay, wada sheekaysigeennii intaan is aragnay ka dib aad ayuu isu badalay wuxuuna ahaa mid wada sheekaysi jacayl, wuxuuna ogaaday meelaha aan ka nuglahay iyo daciifnimadayda shaydaanna waa caawinayay laga yaabee inuu hogaanka u hayay. Wuxuu doonay inuu i arko aad ayaan taas u diidanaa mar walbana waxaan xasuusinayay ballantuu qaaday, balse naftaydaa aad ayaan oga dareemayay inaan jeclahay inaan arko, laakiin suura gal iima ahayn inaan arko ninkayguna magaalda joogo, aad ayaan isugu sii dheeraanaynay waa walboo barya waxaana mar walba xasuusinayay in la i qabo caruurna leeyahay. Wuxuu igu yiri waxaad tahay Xuurl Caynta aduunka. Codkiisa iyo sheekadiisa ayaa waxay ii noqdeen daraag oo kale i qabanaya haddaan saacado moognaado, waxaaan sawirtay anoo hor jooga labadiisa gacmood ku dhex jira see dareemi lahaa, wuxuu i nacsiiyay ninkayga aan marna arag raaxo dalbaadkayga fulintooda iyo farax galintayda awgeed. Waxaan bilaabay inuu madax xanuun igu dhaco maalin ama laba maalmood haddaan chatRoomka ka waayo waxaan kaloo bilaabay inaaan dareemo masayr haddaan arko asoo dadkale la sheekaysanaya ma garanyo waxa igu dhacay, waxaan noqday tan aadka u doonaysa una xiisaynaysa.
Wuu dareemay inaan ku waashay wuxuuna gartay suu iiga faaiidaysan lahaa wuxuuna falkeeda galay suu maalin kale ii arki lahaa, maalin ma soo maro illaa wuxuu soo celiyaa dalabkiisii ahaa inaan ku arkaan doonayaa annaa aan diidayo anoo xujjo ka dhiganaya waa la i qabaa, asna uu leeyahay ee maxaan samaynaa?? Ma saas baan ku jirnaa illaa aan murugo u dhimanno?? Ma caqli gal baa inaan is jeclaanno aana awoodi kari wayno xattaa inaan isku soo dhawaannoo?? Qasab waa inuu xal jiraa aan ku kulmi karno si aan ugu wada noolaano hal saqafhoostii, wax uusan isku dayin lama arko anna wax walba aan ka diidayo illaa uu soo gaaray inuu ii soo bandhigo guur oon ninkaygana ka dalbado furriin si aan isu guursanno, haddaanan saas samyn inaan is dilo ama waasho ama aan ninkaaga dilo. Run aad ayaan u cabsaday..... laakiin waxbaa xaggiisa ii jiiday ina illowsiinayay ninkayga iyo caruurtaydaba waxaabad moodaa inay fikraddu i cajabisay, mar walbuu ila hadlo waan gariirayay ilkahana isku garaacayay waxaad moodaa in korkayga qabow lagu furay, aad ayaan u wareeray, waxaan dareemay inaan naftaydu ninkayga xabsi ugu jirto Jacaylkaan u hayyayna uu dhammaaday waxaan bilaabay inaan araggiisa iyo suu u egyahay aan naco, waan illaaway naftayda iyo caruurtaydaba waxaan ka shallaayay oo nacay guurkaygii iyo noloshayda waxaan dareemay kalinnimo sidii inaan kali ku ahay.
Markuu ogaaday oo hubsaday jacaylka aan u qabo waynankiisa iyo siduu ii hantay wuxuu ii soo bandhigay inaan mushkilo ninkayga ku furo siina wayneeyo mar walba illaa ii i furo arrinkaan horay ugama soo dhicin laakiin markaan maqlay waxaan dareemay inay tahay albaabka kaliye ee ii furan een oga bixi karo waxaan xabsi ahanta u dareemay " waa la noolaashaha ninkayga". Wuxuu ii ballan qaaday inuu i guursan doono ninkaygu markuu i furo ka dib inuuna farxad iyo nolol tan u wacan ku wada noolaan doono.
Arrinkaas samyntiisu iima fududayn yacni inaan ninkayga ku furu dhibaatooyin ii sababa furriin laakiin jacaylka aan ninkaan u qaaday ayaa igala waynaaday run ahaanna waxaan bilaabay inaan dhibaatooyin samaysto ninkaygana buuq ku furo maalin walba. Ninkaygii arrinkaan waa u adkaysan waayay wuxuuna bilaabay inuu guriga ka maqnaado intuu ka maqnaan jiray in ka badan ilaa uu gaaray inuu guriga u yimaado jiif kaliya xaalkaan ayaan ku jirnay dhowr usbuuc annaa aan mar walba sii abuurayo mushkilado cusub, waqti dheer ayay arrintaan qaadatay ninkaygiina waa u sammray dhibtaydii, ninkaan khiyaamada isla wadnayna waa i daahsaday wuxuuna iga dalbaday inaan is aragno sababtoo ah waxaa laga yaabaa inuusan ku furin si dagdag ah waa inaan is aragnaa haddii kale ?????. waan ka aqalay ka noqnoqosho la’aan waxaabad moodaa inuu ibliis dabada iga wado go’aamadana ii goynayo waxaana ka dalbaday inuu muddo ii sugo intaan jaanis ka helayo.
Ma ogtahay in ay jiraan barnaamijyo aad gashan kartid computerkaaga oo aad markaas ku ogaan kartid wax kasta oo computerka lagu qoro iyo website kasta oo lagu booqday, waa muhiim in aad barnaamijyadaas raadsatid si aad qoyskaaga ugu ilaalisid halista ka dhalan karta Internetka....
Maalinkii Arbacada kuna aadanaa 21/01/1421 H. Ayaa ninkaygii i yiri safar shaqo oo shan bari qaadanaya ayaan u baxayaa, farxad ayaa i qaaday waxaana dareemay tanu inay tahay waqtigii aan sugayay. Ninkaygu wuxuu doonay inuu ii diro reerahayga si intuu maqanyahay aan xagga u sii joogo una soo istareexo. Laakiin waan ka diiday boqolaal cudur daarna waan keensaday inaanan bixi karin. Wuu ogolaaday asoo aad u dhibsanaya safarkii ayuuna u baxay maalitii jimcaha ahayd. Maalitii axadda ayaan wada hadalnay waxaana u sheegay inaan diyaar u ahay is araggii waan ogaa waxaan samanayo inay qatar ahaayeen khalad waynna ahaayeen laakiin waxaan iraadadayda iyo awoodayda waa ka sarreeyeen ilaa aan gaaray inaanan wax cabsiyaba dareemin. Waan isla baxnay haa run ahaan waan isla baxnay NAFTAYDA AYAAN IIBSHAY waan raacay anoo isugu sheekaynaya aad ninka si wacan u soo baratid. Waxaan ku ballanay suuqyada midkood ballantii ayuuna ku yimid waxaana fuulay gaarigiisa waan soconnay annagoo magaalada jidadkeeda war wareegayna. Waxba ma dareemin inkastoo xoogaa cabsiya igu jirtay balse waxay ahayd markii ugu horraysay oon la baxo nin aan waxba ii ahayn waxa kaliyoo naga dhexeeya ay tahay sheeko 7 bilood oo kaliya socotay oo ahayd chat roomka iyo halkulan oo ahaa daqiiqad in ka yar, waxaa ka muuqday walwal kan iga muuqda kan ka badan oon ka dareemi karay hadalkiisa.
Ma doonayo inaan in badan ka maqnaado guriga waxaan ka baqayaa inuu ninkayga soo waco ama wax kale dhacaan.Wuxuuiigu jawaabay
Waayo oga fakaraysaa ha soo wacee iska daa inuu ku furood ka istreexdid ayaa laga yaabaaye.
Xoogaa waan soo daahaynaa maxaa yeelay marna si fudud kugu sii dayn mayo waxaa kaliya oon doonayaa inaan xoogaa waqtiya adiga kula qaato ishana kaa buuxsado waxa laga yaabaa inaadan mardanbe ii ogolaan inaan dib kuu arko.
Saas ayay sheekadaydii ku bilaabatay inkastoo walwalkaygu uu sii badanayay saasoo tahay naftaydu waxay sii jeclaysanaysay marwalba inaan la sii joogo. Sheekadeennii waxay bilowday inay u waajahsato xagga romansiga Jacayl, ma garanayo inta saac oon isla joognay xattaa ma dareemin jidka aan hayno iyo meeshaan u soconno toona. Waxaan ku baraarugay anoo jooga meel aanan garanayn, mugdi ah una eg beer lagu nasto, waxaan bilaabay inaan ku qayliyo waa maxay meeshaan aan joogno?! Xaggeena ii wadaa??.. sakanno guduhood waa gaarigii oo istaagay iyo nin kale oo albaabka gaariga furaya iigana soo bixinaya gaariga si xoog ah.......waxaad moodaa wax walba inay sidii biriq u dhacayaa yacni dhaqsaha ........... waan qayliyay ........ waana ooyay.......bal inaan wax i caawiya arko ......... waxaan gaaray inaanan maqlin waxay sheegayaan aanan fahminna, waxaan dareemay dharbaaxo wajiga la iiga dhuftay iyo qaylo la igu qaylinayo iyo ruxruxid la i ruxruxay illaa miyirkii iga tagay cabsida i haysay waynankeeda awgeed. Ma garanayo waxay igu sameeyeen iyo waxay ahaayeen iyo intay ahaayeen toona, laba ka mid ah ayaa uun arkay, wax walba sidii biriq ayay igu dhaafayeen waxaan ku baraarugay oo ku miyirsaday anoo dhabardhabar u jiiffa dharka intii badnaydna la iga siibay jiifana qol faaruq ah dharkaygiina la jeexjeexay waxaan bilaabay inaan qayliyo oon ooyo korkaygoo dhanna wuu wada wasakhaysnaa waxaana filayaa inaan isku kaadshay sakanno ka dib waaba asagii oo soo galay qoslayana.
Waxaan ku iri..........ilaahaybaan idinku dhaarshaye iska kay sii daaya inaan gurigaygii ku noqdaan doonayaaye.
Wuxuu i yiri gurigaaga waad ku noqondoontaa laakiin waxaad iga ballan qaadaa inaadan qofna u sheegin haddii kale fadeexad ayay ku noqon ehelkaaga, haddaad i sheegto ama dacwo igu soo oogtana waxaan ka aargoosn caruurtaada.
Waxaan ku iri waxaan doonayaa inaan gurigaygii aado oo kaliya qofna u sheegi maayo.
Waxaa iga tanbata cabsidii waxaan dareemayay jirkayga oo gariiraya mana joojin oohin intaas uun baan ka xasuustaa wixii dhacay wax kalana ma xasuusto waxaa kaliya oon xasuustaa meeshii markuu iga soo qaaday ilaa uu guriga i keenay waxaa u dhaxaysay 4 saacadood indhuhuu iga xiray gaariga ayuuna i soo saaray wuxuuna igu tuuray meel u dhow gurigayga. Qofna ima arag anoo saas ah "qaawan" gurigaan si dagdag ah u galay, waxaana ku laabtay oohintaydii ilaa ay ilmadii iga dhammaatay ka dib ayaa waxaa ogaaday inay i kufsadeen dhiigna iga da’ayay waan rumaysan kari waayay waxa igu dhacay iyo waxaan naftayda gacmahayga ugu soo jiiday, waxaan maxbuus ku noqday qolkayga ma arag caruurtaydii mana cunteynin afkayga kama dagin waxba alla hoogayeey Jaxiimaan lugahayga ku raadsaday, saan ka dib muxuu xaalkaygu noqon doonaa naftaydaan nacay waxaana isku dayay inaan is dilo naftana iska qaado waxan ka baqayaa fadeexad iyo ninkaygu wuxuu i oran doono ha i waydiin caruurtay waxaan gaaray inaan garan joogitankoodana aan dareemin iyo waxa igu hareeraysan oo dhan xattaa markuu ninkaygii safarka ka soo noqday wuxuu dareemay is badalka wayn ee igu dhacay xaalkaygii aad ayuu u sii xumaaday illaa uu gaaray inuu isbitaal xoog igu geeyo.
Laakiin nasiib wanaag dhakhtarradiii ma ogaan wax igu dhacy waxey uun igu arkeen cunto xumo iyo dhiig la’aan. Waxaan ninkayga ka dalbaday inuu ehelkayga ii qaado sida ugu dagdagga badan aan ayaan u ooyay ehelkayguse aysan waxba ka ogayn waxa iga oohinaya, waxayse iska dhaadhiciyeen in aniga iyo ninkayga mushkilo na dhex taal, waxaa i soo gaartay inuu aabahay la hadlay ninkayga balse wax natiijo ah aysan oga soo bixin sababtooo ah ninkaygu xattaa waxba ma ogayn. Qof garanyo lama arko waxa igu dhacay oo ehelkayga ka mid ah ehelkayga waxay ii geeyeen nin quraan igu aqriya ayagoo u haysta in il ama jinn igu dhacay. Xaq uma lihi inaan ninkayga la sii noolaado, waxaana ka dalbaday furitaan markii hore anaa isla rabay furitaanka laakiin hadda asaan doonayaa inuu iga istareexo si uu gabar dhawrsan u guursado iyo anoo ixtiraamayaa caruurtayda aabahood. Xaq uma lihi inaan ku dhex noolaado dadka sharafta leh. Waxa igu dhacayoo dhan waa waxan labadayda gacmood ku sameeyo. Anigaa gacmahayga ku qotay qabrigayga. Saaxiibka chatroomkuna waxaa uun ahaa wiil ugaaranaya anna dabinkaan ugu dhacay. Qof walba oo sheekadayda ogaada wuxuu igu sifayn doonaa nacas ama caqli laawad waxaas iyo wax ka wayn ayaan xaqsadaa bal rajmi in dhagax la igu dilaan xaqsadaa........ saasooy tahay waxaan tamanninayaa inaysan ku dhicin gabar muslimad ah waxa igu dhacay.
Waxaan rajaynayaa inuu ninkaygu iska kay cafiyo ceebtaan aan u soo jiiday xaq uma laha caruurtaydana waxaan ka rajaynayaa sidoo kale inay iska kay cafiyaan anaa sabab u ahaa sabab u ahaa sabab u ahaa sabab u ahaa ..........
Waxaa haray inaan iraahdo............waa dhimatay saaxiibday usbuucyo ka dib ayey dhimatay sirteediina waa la dhimatay ninkeedii oon ogaan ayayna dhimatay,aniga oo kaliya ayey ii sheegtay anna inaad ku cibra qaadataan awgeed ayaan idiinku soo wariyay. ninkeediina ma furin waxaana ogaaday inuu aad oga murgay iyo inuu ka tagay shaqadiisii, uuna fariistay guriga si uu u koriyo caruurtiisa.
Ilaahay ha u naxariisto danbi dhaafna ilaah u waydiiya, Islamka aloow qofkaaas la dulmiyey walasheena ah.
Posted at 05:40 am by xaashiyare
Been ha sheegin. ka fa,ideyso shekadan!!!
Arrimaha Diinta: Nin ayaa maalin u yimid Rasuulka (scw) waxa uu yiri. Rasuul aloow waxa aan sameeyaa waxyaalo badan oo xun xun hadaba teebaan ugu horeesiiyaa oo aan iska daayaa? Rasuulka (scw) waxa uu ku yiri jooji in aad been sheegtit oo waligaa runta sheeg.
ninkii balan ayuu ku qaaday inuu in uu sidaas yeeli doono gurigiisii ayuuna aaday. markii habeenimadii ay noqotay ayuu damcay inuu wax xado. markaas ayuu soo xasuustay balantii uu Rasuulka (scw) la soo galay. waxa uu markaas is-wayddiiyay.
Haddii subaxdii uu Rasuulka (scw) i waydiiyo xagee ayaad jirtay maxaan ku dhihi? ma waxaan ku dhihi waxaan aaday in'aan wax soo xado? maya saas ma dhihi kar, laakiin been masheegi karo. haddii aan runta sheegana dadka oo dhami waa ay inici waxayna iigu yeeri tuug. waxaana la'igu xukumi xukunka tuuga oo gacantaa la iga jari.
ninkii waxa uu go'aansaday habeenkaas in uusan wax xadin halkaas ayuuna isaga daayay dabeecadii xumayd ee tuugnimada.
maalin ayuu damcay in uu khamri cabo. markaasuu isla hadlay oo yiri oo maxaan ku dhihi bari haddii uu Rasuulka (scw) i waydiiyo maxaad maanta samaysay? Been ma sheegi karo haddii
aan runta sheegana dadku waa ay inici. waayo qofka islaamka ah looma ogola in uu khamriga cabo.
Sidaas ayuu ninkii markuu damco in uu wax xun sameeyaba uu u soo xasuusanaayey balantii ahayd in uu runta sheego. halkaas ayuuna mid mid uga takhalusay wax-yaabihii xum-xumaa oo dhan ilaa uu ka noqday islaam wanaagsan iyo shaqsiyad wanaagsan.
ALLE KOR AHAAYE wuxu yiri kuwa xaqa rumeeyoow! dhowra xilka iyo waajibkuu Alle idin saaray, oo ka mid ahaada run sheegeyaasha suuradda at-towba: Aayaada 119-aad
Cabdullaah ibnu mascuud (RC) waxa laga soo xigtay in nebiga (SCW) yiri : Runta waxay kugu hoggaamisaa dhabbaha samaanta iyofalalka suubban. samaan falidduna waxay xaartaa jidka uu qofku u mari lahaa jannada. Markii uu qofka caadeystana inuu ku hadlo run waxaa Alle agtii looga magacaabaa runlow. beentana waxay kugu hoggaamisaa xumaanta, xumaantuna waxay kugu hoggaamisaa wax xille falid iyo faajirnimo. markii uu qofku been caadeystana waxaa Alle agtii looga magacaabaa Beenlow" Bukhaari iyo Muslim.
Abuu Muxamed al-xasan ibnu cali (RC) wuxu sheegay inuu ka bartay ereyadan soo socda Nabiga (SCW) ka tag wixii aad ka shaki santahay, oo raac wixii aan ku jirin laheynna shaki.
Marka walaalayaal waxaan idinkula dardaarmaayaa in aad runlowyaal noqotaan oo aad ku jihaadaan naftiina iyo shaydaanka.
Ilaahay waxaan ka baryayaa in uu xaqa nagu sugo runlowyaalna naga dhigo oo nala soo saaro maalinta qiyaamaha sidiiqiinta iyo shuhadada. aamiin aamiin aamiin
Posted at 07:34 pm by xaashiyare
Wiilkii hooyadiis ka doortay aafadiisa(xaskiisa).
Arrimaha Diinta: Wuxu hadal ku bilaabay Wiilkani:- Allow ii dambi dhaaf dambiga aan hooyaday ka galay. Aabahay wuxu dhintay aniga oo yar, Hooyadee baa i soo korisay oo ila rafaaday koriimadeyda.
Aniga kiligey beey caruur iga haysatay. Waxay i gelisay iskuul (School) si'aan cilmi u yeesho.
Kadib markaan weynaadayna waxay ii dirtay (Jaamacad)(University) wadamada galbeedka ah. Markaan sii baxaayay beey ila dardaarantay oo ay i tiri Wiilkeygiiyoow Ha i ilaawin, Xiriirkana ha gooyn.
Mudo kadib markaan jaamacadayda soo dhamaystay baan wadakeygii ku soo laabtay. Waxaana aan lasoo laabtay Dabeecad qalafsan oo aan raxmad lahayn. Waxaan noqday mid un oo ka dambeeyo nolosha adduunka iyo qayaaligeeda.
Waxaan helay shaqo aad u heersareysa, Kadib waxaan bilaabay inaan raadiyo mid aan nolosha la wadaago. hooyaday baa ii tilmaantay (Gabar dhowrsan oo diin leh). Lakiin waan ka diiday oo waxaan rabay gabar xadaarada (Ilbaxnimada) la socoto " Waa siday yiraahdaanee" oo quruxna leh. Waxaan guursaday gabar noocaan doon doonaayay ah.
Lix bilood (6 Bilood) markaan isqabno beey xaaskeeygii biloowday inay hooyaday caaydo aayna karahsato. Taasina waxay keentay inaan anigana hooyadeeydii karahsadi maadaama ay mar walbo xaaskeyga isku xun yihiin. Maalin maal maha kamid ah baan imid xaaskeeyga oo ooyneeysa, Markaan weydiiyay waxa ay la ooyneeso waxay tiri: Ma u adkeeysan karo ama hooyadaa raac ama aniga.
Waan xanaaqay oo aan hooyaday ku iri iifa tag gurigeeyga. Weey ooyaday waxayna tiri markay sii baxaysay: Wiilkeygiyow Alle hakuu gargaaro. saacado kadib markii uu xanaaqii iga dagay baan raadiyay laakiin waan waayay. Kadibna gurigeeygii baan isaga soo laabtay.
Xaaskeeygiibaa isku deyday inay i hilmaansiiso hooyadeydii qaaliga ahayd. Anigana caqli yaradetduu sidii baan ku ilaaway oo maan deydeyin.
Sidii-buuna xiriirkiina ku kala go'ay. Waxaa kasoo wareegatay mudo waan xanuunsaday jiro xun oo aan Isbitaal lagalo. Hooyaday baa ogaatay inaan isbitaal galay, Weey i soo booqatay laakiin inteeysan ii soo gelin vaa xaaskeygii al-baabka ka celisay oo ku tiri ku noqo meeshaad ka timid.
Hooyadeyna sidii beey ku laabatay. Isbitaalkiibaan kasoo baxay xaalad nafsi ahna waan u xanuunsaday. Shaqadeydii baa la iga taqalusa, deymo badan baa la'igu yeeshay gurigeygiibaa la igala tagay.
Intaasina waa xaaskeeygii oo wax walba dooneysa. Markaan kusoo baxay nin xanuunsan oo aan Shilin haysan beey xaaskeygii quruxda lahayd i tiri: Maadaama aad shaqo la'aan noqotay,
Wax maal ahna aadan haysan, Mujtamacana aadan meel ku lahayn hadaba ku dooni-maayee iska-keey fur!.
Madaxii baa i weeynaaday, Naagtii aan hooyaday ka doortay sidaa beey maanta ii gashay. Waan fura, kadibna mugdigii aan ku jiray iyo hurdadii baan ka toosay, Kadib waxaan doon-doonay hooyaday, Waan helay inteesa ka helay?
Waxaan ku arkay hooyaday oo ku nool sadaqada lasiiyo. waan u soo galay markay i aragtay beey ooyday. Anigana lugaheedii baan qabsaday oo aan la dhacay oohin, Labadeeniiba waxaan isla qabsanay oohin. waxaan xaaladaa ku sugneyn mudo saacad ah.
Waxaan ka soo waday meeshii ay joogtay oo aan keenay halkii aan deganaa. Maalintii wixi ka dambeeyayna hooyadeet ma caasin oo waxaan u noqday baari adeeca, iyo mid ku toosan
Alle awaamirtiisa. Hadana waxa aan ku noolahay nolol raaxo leh iyo hooyo macaaN, Alle dambigeeda ha dhaafee.
Aamiin Aamiin Aamiin.....
Posted at 07:28 pm by xaashiyare
isa sax adiga intadan dadka sixin, sheko xikmad leh ka fa,ideyso!!!!!
Sheeko Cajiib ah: Maalin ayaa afar nin aaday Masjidka. Kadib nin walbo wuxuu bilaabay inuu tukado salaadii sunada. Kadib intay ku jireen salaadii sunada ayaa waxaa soo galay Mu'adhinkii oo bilaabay inuu aadaamo.
Mid ka mid ah afartii nin ayaa ayaga oo salaada ku jiro ku yiri Mu'adhinkii:
“Mu hubtaa in wakhtigi aadhaanka la gaaray”? Ku kale oo asna salaad ku jiray ayaa yiri:
“War lama hadlo ayada oo la tukanayo. Hada salaadaadii waxba maka jirto.” Ku sedexaad ayaa isna kadab yiri kii labaad:
“Maxaad adigaba u hadlaysaa adiga oo tukanayo? Adigana salaadii waa kaa burtay.
” Ki afaraad oo asna salaada ku dhexhadlay ayaa yiri: “Ilaahay baa mahad leh. Aniga doodooda kama qayb galin.”
Faa'iido: Ha sixin dadka adiga oo khaldan. Cidan wanaag ha u sheegin adiga oo khaldan.
Inkastoo afartan nin damceen inay wax saxaan, hadana mid walbo wuu khaldanaa,
walibana midba midka ka danbeeyo ayuu kasii
Posted at 07:27 pm by xaashiyare
Qiso cajiib ah, Abuu xanifa oo musliminta guul u soo hoyey, ka fa,ideyso!!!!
Qiso Cajiib ah: Wakhtigii taabiciyiinta magaalada ugu wayn ee Muslimiinta wax ka bartaan waxay ahayd magaalada Baghdad ee wadanka Iraq. Sidoo kale waxay ahayd magaalada laga maamulo dowlada Islaamka.
Maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxa magaalada yimid nin ka socda Boqortooyadii Ruumka (The Roman Empire), kaasoo ku yiri khalifkii Muslimiinta inuu hayo 3 su'aal oo haday Muslimiinta ka jawabaan uu siin doono maal badan oo uu ka keenay boqorka Ruumka.
Khalifkii ayaa isugu yeeray dhamaan culimadii Muslimiinta iyo dhamaan wixii aqoonyahan ahaa, kadib ayuu amray ninkii Ruumaaniga ahaa inuu su'aalihiisii soo daayo. Ruumaanigii ayaa waydiiyay Muslimiintii halkaas isugu timid: “kow Ilaahay horaantiis maxaa jiray? Labo, Ilaahay dhankee ayuu u jihaystaa? Sedex, Ilaahay muxuu hayaa iminka”?
Ruux hadlo ayaa la waayay. Shibay shib ayaa ka dhacday! Kadib wiil yar oo la fadhiyay aabihii ayaa istaagay oo yiri, 'aabe, anaa ka jawaabaayo su'aalahaas, anigaana idinka aamusiin doono” Kadib ayuu wiilkii yaraa fasax ka qaatay Khalifkii. Markaasuu ku yiri Romanigii: “Ma taqaanaa sida wax loo tiriyo”? “Haa” ayuu kujaawabay roomaanigii. Markaas ayuu wiilkii yaraa yiri:
“Bilow inaad tiriso tobon, adiga uu tiranaya hoos”. Romanigii ayaa bilaabay 'sagaal', 'sideed', 'todobo' ilaa uu ka gaaray Kow. Markuu kow gaaray ayuu willkii yiri: “Maxaa ka danbeeyo Kow”? Markas ayuu ku jawaabay: “Waxba. Kow ayaa ugu danbeeya.” Wiilkii ayaa yiri kadibna: “Sideed marka ku waydiisay wax jiro ka gadaal Midka Kaliya, Midka Kowga ah, Midka Axadka ah, Midka Joogidda abidka ah, Midka ugu horeeya, Midka ugu danbeeya, Midka daa'imka ah”? Romanigii ayaa la dhacay jawaabta canuga yar asaga oo bilaabay tii labaad oo ahayd: “Sheeg Ilaahay dhankee ayuu u jihaystaa?
Wiilkii yaraa ayaa yiri shumac hala keeno, kadib-na hala daaro. Markii la daaray ayuu wiilkii waydiiday: “Ii sheeg halka uu holaca aadayo ama u jihaysanayo”? Romanigii ayaa ku jawaabay: “holaca waa iftiin aanan u jihaysanaynin dhanna. Waqooyti, koonfur, bari iyo galbeedba wuu ifinayaa.
” Wiilkii ayaa ku jawaabay: “Hadii iftiinka yar uu iftiiminayo dhamaan afarta jiho, uusanna ku ekayn dhanna, maxaad u malayn Iftiinka “Nur-us-Samawati-wal-'Ardh”? Ilaahay dhanwalbo ayuu eegayaa, waana iftiinka dhamaan dhulka iyo samawaatka. Ninkii ayaa hadana la dhacay jawaabta wiilka yar.
Intuusan waydiin su'aashii 3aad ayaa wiilkii yaraa ku yiri Romanigii: “Adiga minbar ayaad fuushaa, anigana dhulka ayaan taaganahay, hase yeeshee anaa la iga rabaa jawaab celin, marka miyasan fiicnayn inaad soo degto si aan aniga minbarka u fuulo, si dadka dhamaan u maqlaan jawaab celintayda”? Romanigii ayaa taas aqbalay oo kasoo dagay minbarkii, wiilkii yaraana halkiisii ayuu fariistay.
Kadib ayuu waydiiday su'aashii 3-aad oo ahayd: “Sheeg Ilaahay muxuu hayaa iminka”? Wiilkii yaraa ayaa ku jawaabay: “Hada Ilaahay wuxuu sababay inuu beenaale kasoo dajiyo minbar sare kuna badalo kii asaga aaminsanaa. Iminka Ilaahayga aad waydiinayso waxa uu hayo wuxuu sababay inuu beenaale diintiisa ku jeejeesaayo uu dhulka dhigo korna u qaado kii aaminsanaa. Ilaahayna maalin walbo xaalkiisa waa sidii uu asaga doono.” Markaas ayuu wiilkii akhriyay aayada 29aad ee Suratu-Ar-Raxmaan oo ahayd: ķóÓśĆóįõåõ ćóä Żöķ ĒįÓųóćóĒęóĒŹö ęóĒįśĆóŃśÖö ßõįųó ķóęśćņ åõęó Żöķ ŌóĆśäņ
Ninkii Romaniga ahaa ayaa asaga oo qalbi jab ku dhacay ku noqday dalkiisii. Wiilkii yaraa ayaa asaga noqday Imaam aad loo xurmeeyo lagana qaato diinta Islaamka. Wiilkan yar ayaa noqday Imaamkii waynaa Islaamka, Al-Imam Abu Xaniifa.
Posted at 07:23 pm by xaashiyare
Qiso gaaban, Nin gaal ah oo donayey in uu ceebeyo Cali bin abii dhalib balse fashilmay.
Qiso Cajiib ah: Nin gaal ah ayaa maalin u yimid Cali Ibn Abi Daalib (R,A) asaga oo rabo inuu waydiiyo su’aal, sna leh su’aashaasi way ku adkaan doontaa Cali. Wuxuu fiirsaday Cali oo la joogo dad badan, markaas ayuuna doortay inuu su’aasha waydiiyo, si hadii Cali ku dhoco su’aashaadi uu u ceeboobo.
Ninkii ayaa Cali waydiiday inuu sheego nambar hadii loo qaybiyo nambar u dhaxeeyo 1-10, ay jawaabta noqonayso mid dhaban ah, oonan kisi ahayn. Cali ayaa ku jawaabay.
‘Maal-maha sanadka ku dhufo maal maha UsbuUca, waxaadna heli jawaabta aad I waydiisay’.
Ninkii ayaa yaabay, kadibna bilaabay inuu xisaabtan galo si uu u ogaado inay sax tahay jawaabta Cali iyo in kale.
La yaab ayay ku noqotay inuu Cali sheegay jawabatii uu rabay. Maxaa yeelay sanadkii wuxuu leeyahay
360 maaL-mood (waa sida calenderka carabiga tusinayee). Usbuucana wuxuu leeyahay 7 bari. Hadii labadooda
la isku dhufto (360 x 7= 2520). Markaas hadii 2520 loo qaybiyo nambar u dhaxeeyo 1-10 sida su’aasha ahayd, waxay noqonaysaa sidatan:
2520 loo qaybiyay 1 = 2520
2520 loo qaybiyay 2 = 1260
2520 loo qaybiyay 3 = 840
2520 loo qaybiyay 4 = 630
2520 loo qaybiyay 5 = 504
2520 loo qaybiyay 6 = 420
2520 loo qaybiyay 7 = 360
2520 loo qaybiyay 8 = 315
2520 loo qaybiyay 9 = 280
2520 loo qaybiyay 10= 252
Ninkiina meesha ayuu ku ogaaday Jawaabta cali uu ka bixiyey iney tahay 100% mid sax ah.
Hadaba meeshaan waxaa laga qaadan karaa qofka Alle isku xiro marnaba inaanan waxba laga qaadi kareen, Sidoo kale haddii aad ilaaliso wax yaabaha uu Alle dushaada dhigay, Alle-na uu ku dhawri doono Adduun iyo Akhiraba.
Posted at 07:18 pm by xaashiyare
Qiso cajiib oo dhexmartay khalifkii cadilka ahaa ee cumar ibn cabdul cazil iyo mid ka mid ah shaqalihiisa
Qiso Cajiib ah: Khaliifkii caadilka ahaa ee Cumar Ibn Cabdul Caziz (rc) ayaa habeen seexan waayay kulayl dartii, wuxuuna ku noolaa guri daciif ah, asaga oo sida la-ogsoon yahay diiday inuu dago qasrigii kuwii ka horeeyay ay dageen, Markaas ayaa shaqaale la noolaa isaga bilaabay inuu babiyo si uu kulaylka jira wax uga taro.
Amiirkii Muslimiinta ayaa qabow yar dareemay kadibna seexday. Hase yeeshee shaqaalihii ayaa daalay, kadibna hurda ka tanbadatay, indhahana is galshay.
Cumar (rc) ayaa soo toosay, arkayna inuu shaqaalihii seexday. Markaas ayuu bilaabay inuu babiyo, Shaqaalihii ayaa cabaar kadib soo toosay, isagoo arkay in Amiirkii Muslimiinta babinayo.
Markaas ayuu naxay, halmarna istaagay. Cumar (rc) ayaa ku yiri "Adigaba Noole baad tahay. Markaan rabay inaan seexdo waad I babisay si aan qabow u dareemo, markaad adiga
seexatayna aniga ayaa ku babiyay si aad qabow u hesho.
Ma dhib baa taas ku jirto'?
Fiiro: hadaba intee naga mid ah ayaa sidaasi naxariista ku jirto ula dhaqanto shaqaalaheenna?
Ayaga oo daallan ayaa laga yaabaa inaan kusii qaylinoo, dhib kale u gaysano iyo wax yaale kale.
Ilaahay (sw) halaga xishoodo oo aan naxariis tusno inta tabarta yar ee na hoos timaada.
Posted at 07:06 pm by xaashiyare